U-Mohamed Elneny Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AFRIKA U-Mohamed Elneny Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leNqabana yebhola yeBhola eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Neny". Indaba yethu ye-Mohamed Elneny Childhood Indaba kunye ne-Untold Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye nezinto ezininzi ezithintekayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nokungahambisani naye kwinqanaba kodwa abambalwa bajonga uMohamed Elneny Bio onomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
U-Mohamed Elneny Ibali leBantwana leNkcazo ye-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
U-Mohamed Naser El Sayed Elneny wazalwa ngo-11th kaJulayi 1992 e-El Mahalla El Kubra, eYiputa. Njengomntwana, u-Elneny wayezimisele ukuba abe nebhola kwindlu yakhe yaseYiputa.
As Guardian Ubeka, wayengumdlali wecala lomgca wesitrato owayelala nebhola ngexesha lobuntwaneni bakhe. Uqhagamshelwano lwakhe lokuqala nebhola luvela kuyise, owayengumqeqeshi weqela lomfana eBaladeyet Al-Mahalla eYiputa. I-destiny yebhola yayisetyenziswa xa uEleny eselula kakhulu.
"Ndiyakhumbula ukuba utata wayefuna ukuba ndilale kunye nebhola," UEleny uthi. "Wathi: 'Unxulumane nebhola.' Waqala ukuqeqesha xa ndandineminyaka emithathu ubudala. Inqweno yakhe enkulu kukuba ndibe ngumdlali webhola. "
U-Elneny waqala ibhola lakhe elutsha kunye no-Al Ahly. Kwi-2008, wathuthela e-El Mokawloon SC ngexesha le-2010-2011. U-Elneny waphuma kwaye waba rhoqo kwiqela lokuqala. Ukulandela inhlekelele yasePort Said Stadium, ekuqaleni kukaFebhuwari 2012, i-Premier League League yavalwa kwaye yonke imitshana elandelayo ye-2011-12 yase-Egypt Premier League yahlehliswa. Ngo-10 Matshi 2012, uMbutho webhola laseYigeria usememezele isigqibo sabo sokususa intsalela yonyaka.
U-Elneny wayefanele avule uhambo olwamthatha kwiinqanaba zebhola yaseBasel yaseSwitzerland ngaphambi kokufika eArsenal. I-5 yezigidi zeYuro ezijongene neArsenal yinto ekugqibeleni ishintshe ubutyebi bakhe.
U-Mohamed Elneny Ibali leBantwana leNkcazo ye-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
U-Elneny udonsa amandla kumfazi wakhe othandekayo nomhle. Bobabini isibini sinomntwana ogama linguMalak.
U-Elneny akulona uhlobo lokukhangela ukusabalalisa okungafunekiyo ngaphandle kwintsimi okanye ukuphazamiseka izibane ezikhanyayo zesixeko. Elneny kunye nokunyamekela ngemicimbi yentsapho kunye nekhaya labo. Ukususela kwiintsuku zakhe zokuqala, ubudlelwane phakathi kuka-Elneny kunye nonyana wakhe buhlala lujonge.
U-Mohamed Elneny Ibali leBantwana leNkcazo ye-Untold Biography Facts -Ubomi bomntu
U-Mohamed Elneny unelungelo elilandelayo kubuntu bakhe.
Amandla kaMohamed Elneny: Ucinga kakhulu, unyanisekile, uvakalelo, uvelwano, uyancenga, u-Tireless, Unxulumene, uMfundisi oPhezulu kunye noMhlobo.
Ubuthakathaka bukaMoses Elneny: Ngamanye amaxesha, u-Elneny unokuba nomoya ongenakunqwenela, ukungaxolisi.
Yintoni u-Mohamed Elneny ayithandayo: ubuciko bombuso, izinto zokuzonwabisa ezisekhaya, ukuphumla kufuphi okanye emanzini, ukunceda abo bathandekayo, ukutya okulungileyo kunye nabo Mohamed Salah, umhlobo wakhe waseYiputa.
Yintoni u-Mohamed Elneny ayithandiyo: Ukutyhila ulwazi lobomi bomntu.
U-Mohamed Elneny Ibali leBantwana leNkcazo ye-Untold Biography Facts -yokuPhila
Indlela yokuphila kaMohamed Elneny ingabonakaliswa kwisithombeni esisodwa. Akayena mdlali onqabileyo kunabo bonke emhlabeni, kodwa ngokuqinisekileyo uyonwaba ubutyebi bakhe kwaye uyisebenzise ngendlela efanelekileyo.
U-Mohamed Elneny Ibali leBantwana leNkcazo ye-Untold Biography Facts -Ubomi Obuthathaka
Ukuba uye wakhathalela u-Elneny ekubeni wajoyina i-Arsenal esuka eBasel kwi-2016, uya kukwazi ukuba umYiputa uthanda into encinci.
Okokuqala, kwakukho ukuphanga Alexis Sanchez ngaphesheya kweChile engafanelekanga kwiNdebe yeHlabathi, kwaye kungekudala kwakukho ukugquma ngokucacileyo kumntu ofanayo emva kokuba ashiye iArsenal eManchester United.
Ihlabathi laseYiputa liye lachitha iimbotyi kwisivumelwano esitsha sikaMesut Ozil ngaphambi kokuba ayenzelwe. Moh Salah emva kokumangalela u-Elneny ngokumangalela ukuba afune ukuba abalandeli bavote ngaye ngokuphindaphindiweyo ngokuthi utyunjwe kuMdlali we-Arsenal yoMvuzo weNyanga.
U-Mohamed Elneny Ibali leBantwana leNkcazo ye-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
U-Mohamed Elneny ekuqaleni wayevela kwimvelaphi yentsapho ephakathi kwamabhola ngaphambi kokutsalwa kwebhola lebhola ekuhlawuleni abazali bakhe abathandekayo, uMnu noNksz Naser El Sayed Elneny. Unina ungumgcini wendlu wesikhathi esigcwele ngelixa uyise engumqeqeshi wolutsha osemhlala phantsi.
Impumelelo ka-Elneny namhlanje ibe ngumphumo wobugcisa bukayise njengomqeqeshi wolutsha. Ngaphezu koko, uxhasa unina, abazalwana kunye noodade.
U-Mohamed Elneny Ibali leBantwana leNkcazo ye-Untold Biography Facts -Ubomi Bwenkolo
ungumSilamsi ozinikeleyo, othandaza kathathu ngosuku. Uthabatha umthandazo wakhe kwiindlela zokuhamba. Xa engekho umlenze wakhe wokuthandaza, u-Elneny usebenzisa nayiphi na impahla yezemidlalo efanelekile ukuba yamkelwe ngukholo lwakhe. Uyabona uRamadan ngokungqongqo njengoko kuboniswe kwisithombe esingezantsi.
QHUBEKA: Siyabulela ngokufunda iNdaba ka-Mohamed Elneny yoBantwana kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.
Ibhola lebhola laseYiputa
I-Samuel Eto'o Ibali leBantwana leNdaba Plus Untold Biography Facts
I-Medhi Benatia Ibantwana Ibali LeNgxelo ye-Untold Biography Facts
Iindaba zeNaby Keita ebuntwaneni kunye ne-Untold Biography Facts
I-Rigobert Ingoma Intsha Yembali Plus Untold Biography Facts
I-Victor Wanyama Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
U-Emmanuel Adebayor Ibali leNkwenkwe yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Christian Benteke Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
I-Riyad Mahrez Ibali loMntwana kunye ne-Untold Biography Facts
U-Pierre-Emerick Aubameyang Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts
Umhla oguqulweyo: Oktobha 28, 2019
Umhla oguqulwe: Matshi 4, 2018
Umhla oLungisiweyo: Agasti 4, 2018